Unyango olu-7 lweNdalo lweNyango lweArmoriasis [Amanyathelo oNyango lwendalo]
Unyango olu-7 lweNdalo kunyango lweArmoriasis
11 / 03 / 2019 /0 Amazwana/i rheumatism/av ubuhlungu
Isifo samathambo sisifo esidibeneyo esixineneyo esinokwaphula i-cartilage kwaye sibangele iintlungu ngokudibeneyo. Yiloo nto kanye abantu abaninzi bekhangela amanyathelo anokubanceda badibane namayeza. Apha unokufunda ngakumbi malunga nonyango lwesixhenxe lwemvelo lwe-psoriatic arthritis enokunceda ukunciphisa iintlungu.
I-Psoriasis arthritis ichaphazela malunga neepesenti ezingama-30 kwabo banezifo zesikhumba ulusu - ebonakaliswa ngwevu, isikhumba esidlakadlaka, phakathi kwezinye izinto, iingqiniba, ulusu kunye namadolo. Intlungu edibeneyo, ukuqina kunye nokudumba zizimpawu ezintathu eziqhelekileyo ze-psoriatic arthritis- kwaye inokuchaphazela ngokuthe ngqo i-vertebrae kunye neminwe yakho.
Silwela abo banezinye izifo ezinganyangekiyo kunye nezifo ukuba babe namathuba angcono onyango kunye noviwo - into ayivunyelwanga ngumntu wonke, ngelishwa. Yabelana ngenqaku, njengathi kwiphepha lethu le-FB og ijelo lethu le-YouTube Kwimithombo yeendaba zentlalo ukusijoyina kumlo wokuphila ubomi bemihla ngemihla kwabo baneentlungu ezingapheliyo.
Eli nqaku lihamba nonyango lwesixhenxe lwendalo lwe-psoriasis samathambo esiya kukunceda uthembise iimpawu zakho. Ezantsi kwenqaku unokufunda kwakhona izimvo zabanye abafundi kwaye ufumane iingcebiso kunye neengcebiso ezilungileyo.
1. Ialoe vera
Abantu abaninzi baqhelene neempawu zokuphilisa i-aloe vera- kwaye mhlawumbi ngakumbi ngokuchasene nokutshiswa lilanga esikhumbeni. Akumangalisi ukuba kuyinyani ukuba esi sityalo sendalo sinokunceda ngokuchasene ne-psoriatic arthritis. Iikhrimu ezisekwe kwi-Aloe vera kunye neeoyile zinokunceda ukunciphisa ulusu kwakhona, zinciphise ukuntywila kwaye zinciphise imvakalelo yokuva iintlungu.
Uphando (1) igqibe kwelokuba i-81% yezigulana ixele ukuphuculwa ngokusebenzisa i-aloe vera kwi-psoriasis yabo kunye nesifo samathambo. Olunye uphononongo lophando lubonakalisile ukuba iyasebenza ukunciphisa ukuvuvukala (2) kunye nokuba kunciphisa ubuntununtunu bendawo.
I-Yoga, ukuzolula kunye nokuziqhelanisa nokunyakaza kunokuba yindlela elungileyo yokuphelisa uxinzelelo lwengqondo kunye nomzimba- ngakumbi ngaphambi nje kokuba ulale. Kwinqaku elingezantsi ungabona inkqubo yoqeqesho ekubonisa ukuziqhelanisa nokuzola okuhlanu.
Isifo samathambo esihambelana nokudibana ngokuthe ngqo kumalungu aqinile kunye nabuhlungu. Ngokusebenzisa imithambo yemihla ngemihla yokwolula kunye nokuhamba, unganceda ukugcina amalungu ahamba kwaye uthintela ukonakala. Kwividiyo engezantsi uza kubona izinto ezintlanu zokuzilolonga.
ICapsaicin sisithako esisebenzayo kwizityalo zepepile. Olu nyango lusetyenziswa kwiikhrim ezahlukeneyo zentlungu kunye neoyile kubandakanya iLinnex. Isizathu sokuba isetyenziswe kukuba i-capsaicin inefuthe leklinikhi eliqinisekisiweyo ngohlobo lokuthomalalisa iintlungu, ukunciphisa ukudumba kunye nokuba bomvu kolusu-oluhambelana ngqo ne-psoriasis.
Xa ioyile enjalo ifakwe kulusu, oku kuya kunceda ekuthinteleni imiqondiso yentlungu endaweni. Ngamanye amagama, ioyile ithintela indawo ekuthumeleni imiqondiso yeentlungu kwingqondo- enokunika ikhefu kwintlungu.
Ukutya okufanelekileyo kunye nomxholo ophezulu we-antioxidants kunye nezondlo ezibalulekileyo ezichasayo nazo zibalulekile kwi-rheumatologists. Ukutya 'kwe-fibromyalgia' kulandela iingcebiso zesizwe zokutya kunye nezikhokelo. Unokufunda ngakumbi ngayo kwinqaku elingezantsi.
I-Turmeric kunye neempembelelo zayo zokunyanga iphakathi kwezona zinto zibalulekileyo zibhalwe emhlabeni- kunye nokusetyenziswa kwayo ngokuchasene nokuphazamiseka kwamathambo. Kwezinye iziphumo ezilungileyo kwi-turmeric, kunye ne-Curcumin yayo esebenzayo, kuye kwabonwa ukuba inokudlala indima ekuthinteleni i-Alzheimer's, ukunciphisa ithuba loxinzelelo kunye nokuphucula ukusebenza kwemithambo yegazi.
Kwisifundo (3) Abaphandi bagqibe kwelokuba i-curcumin isebenza ngakumbi kune-diclofenac sodium (eyaziwa ngcono njengeVoltaren) kunyango olusebenzayo isifo samathambo. Baphinde babhala ukuba ngokungafani neVoltaren, i-curcumin ayinazo iziphumo ezibi.
I-Turmeric ke kunokuba yindlela esempilweni kwaye ilungile kwabo banengxaki ye-osteoarthritis kunye / okanye i-rheumatism -kodwa asiboni zindululo zininzi zivela kwii-GP zokuba izigulana ezinobulwelwe kufuneka zibe ne-turmeric endaweni yamayeza.
Uninzi lwe-rheumatism kunye ne-psoriatic arthritis nayo ikhathazwa kukudibana kwentamo kunye namagxa. Banokwenzakala okuphezulu kwento edume ngokuthiwa stress entanyeni. Kule nqaku yeendwendwe evela kwiziko laseRåholt Chiropractor kunye nePhysotherapy unokufunda ngakumbi malunga nokufunyaniswa kwesi sifo.
I-PS: Ikhonkco livula kwifestile entsha.
Unyango lwe-Acupuncture lonyango olubhalwe kakuhle olunokunciphisa iintlungu zemisipha ngenxa yesifo samathambo. Nangona kunjalo, sifuna ukugxininisa ukuba sithetha apha malunga nokunyangwa kwamayeza okunyanga - okt unyango lwenaliti yemisipha ejolise kwimisipha echaphazelekayo. Unyango olunjalo kufuneka lwenziwe kuphela yingcali yezempilo yoluntu (enje ngokuba ngugqirha okanye umguli wale mihla).
I-acupuncture ye-intramuscular (ekwabizwa ngokuba yinaliti eyomileyo okanye ukukhuthaza intramuscular) isebenza ngeendlela ezininzi-olu nyango lunokukhokelela ku:
Ukuhamba kwegazi okuphuculweyo
Izicubu ezincinci ezithambileyo kunye nentlungu yemisipha
Ukunyusa ukunyanga kwindawo yokunyanga
Iinaliti zisebenza kwinqanaba le-neurophysiological apho ziqhekeza uxinzelelo olunzulu lwezihlunu kunye nokunciphisa ukuhanjiswa kweempawu zentlungu yalapho. Indlela yonyango ekhuselekileyo nethambileyo esetyenziswa njengezongezelelo kunyango lomzimba wezihlunu, izinzwa kunye nokudibana.
Apha ngezantsi unokufunda malunga namanye amanyathelo asibhozo okulwa nosulelo anokuba luncedo kwi-rheumatics.
5. Ityiwa ye-Epsom (ityiwa)
Ityiwa ye-Epsom sisithambiso esaziwayo sokuhlamba esisetyenziswa ngabantu abaninzi abane-psoriasis kunye ne-psoriasis arthritis. Ityuwa inyibilika ngokulula emanzini okuhlamba kwaye ingene kulusu. Ukusetyenziswa rhoqo kunokusebenza ngokuthomalalalisa ulusu olungacaphukiyo kunye nolusu.
Uninzi lukwachaza oku kulandelayo xa uyisebenzisa ngebhafu eshushu:
Ukuphumla kunye nokuDambisa uxinzelelo
Ukukhululeka kubuhlungu beMisipha
Ukucaphuka kancinci kwesikhumba kunye nokuntywila
Nangona kunjalo, kufanelekile ukukhankanya ukuba izazinzulu zikholelwa ukuba ikakhulu kukugeza okufudumeleyo okusebenza kakhulu ekunciphiseni izihlunu ezibuhlungu kunye nomzimba owukhathazayo. Kodwa izifo zolusu zibonakala ngathi ziyakwazi ukuncitshiswa ngandlel 'ithile kusetyenziswa iityuwa ezithile zebhafu-ezinje nge-epsom ityiwa.
Funda: Yintoni omele uyazi nge-Psoriasis Arthritis [Isikhokelo esikhulu]
6. Unyango lomzimba kunye nokuthambisa
I-Psoriatic arthritis ibangela ukwanda kweziganeko zentlungu kwezihlunu kunye namalungu. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukufumana uncedo lweengcali ukuze uqhubeke nokudibana kunye nokuqina kwezihlunu. Uninzi lwee-rheumatologists zisebenzisa unyango lweemisipha kunye namajoyina ngokusebenzisa iikliniki ezinelayisensi kawonke-wonke.
Eyona nto ilungileyo kumntu one-psoriatic arthritis ihlala ingugqirha osebenza ngayo yomibini imisipha kunye namalungu- anje nge-Therapist yesandla okanye i-chiropractor yanamhlanje. Oku kunokunceda ukugcina ukuhamba kwamalungu kunye nokunciphisa iintlungu kwimisipha eqinileyo.
Ngelishwa, isifo samathambo isifo se-psoriasis sisifo esichongiweyo esinganyangekiyo. Kodwa ngoncedo lweklinikhi enesakhono kunye nogqirha wakho, unokugcina uninzi lweempawu zibi. Sigxininisa kwakhona ukubaluleka kokuzilolonga okwenziwe ngokwezifiso kwabo banesifo samathambo e-psoriatic.
Cofa ekunene kwaye "uvule kwiwindow entsha" ukuba ufuna ukuqhubeka nokufunda eli nqaku emva koko.
7. Itiye eluhlaza
Iti eluhlaza iqulethe inqanaba eliphezulu leekateyini - ii-antioxidants ezomeleleyo ezaziwa ngokuba neepropathi ezichasayo ezichasayo. Oku kunokunceda ukunciphisa imeko yokuvuvukala kunye nokudumba okuhambelana nayo kwi-psoriatic arthritis kunye nezinye izifo ezidibeneyo.
Uphando lubonakalisile ukuba luyasebenza, phakathi kwezinye izinto, ngokuthintela icandelo lokosulela elibizwa cytokine interleukin-1. Le blockage inceda ukunciphisa amathuba okuba i-psoriasis arthritis ichithe i-cartilage eyongezelelweyo kunye nezinto ezidibeneyo.
Sisoloko sicebisa ukuba ukutya kweerheumatologists kuqulethe inqanaba eliphezulu le-antioxidants - oku kufumaneka kwimifuno nakwiziqhamo ezininzi ezahlukileyo.
Funda: Iindlela ezisi-7 ze-LDN zinokukunceda ngokuchasene neFibromyalgia
Chukumisa oku ukuba wabelane ngakumbi. Enkosi kakhulu kuye wonke umntu onceda ekukhuthazeni ukuqonda ngakumbi kwabo baneentlungu ezingapheliyo.
IPHEPHA ELANDELAYO: -I-Fibromyalgia kunye neNtlungu yasekuseni [into ekufuneka uyazi]
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Naturlige-behandling-psoriasis-artritt.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-03-11 20:55:212021-03-24 10:59:59Unyango olu-7 lweNdalo kunyango lweArmoriasis
Iimpawu ezi-Fibromyalgia ezaziwayo Imithambo emi-6 yokuzilolonga ngokuchasene neNosteoarthritis yeNtloko